एस एस इन्टरटेन्मेन्टको प्रस्तुतीमा नेपाली कथानक चलचित्र आकाशे खेतीको प्रद्र्धशन मिति आज एक कार्यक्रमका विच घोषण गरिएको छ । हास्य प्रद्धान कथामा तयार पारिएको चलचित्रलाई चर्चित निर्देशन उदय सुब्वाले निद्र्धेशन गरिएको छ ।
मनोरञ्जनात्मक ढंगबाट तयार पारिएको चलचित्रमा समाजका विभिन्न घटनाक्रमलाई मनोरञ्जनात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विक्रमको छायाँकन , राजु किरातीको द्धन्द्ध , राम जी लामिछानेको नृत्य निर्देशन रहेको छ ।
« हप्तामा कतिपल्ट शारिरिक सम्पर्क गर्दा बच्चा बस्छ ? बाँझोपनाबाट कसरी बच्ने ? डा. सबिना सिम्खडाको सुझाब (Previous News)
(Next News) “कथा मृत्युको” लिएर आए गीतकार चन्द्र प्रसाईं(भिडियो सहित) »